Waa inaan hubinaa in qof walboo bulshada kamid ah la tirinaayo si aan dhamaanteen u helno ilaha aan u qalano. Tirakoobka wuxuu ku saabsan yahay sheegashada awooda bulshadaada iyadoo la muujinayo sida Mareykanku runtii u eg yahay.
Tirakoobka waa fududahay waana aamin in la dhammaystiro. Qof kasta oo ku nool cinwaankaaga waa in la tiriyaa, iyadoon loo eegin jinsiyadda ama ay ku jiraan carruurta.
Muuji sida aad uga go'an tahay dhammaystirka tirakoobka adoo saxeexaya ballan qaadkeena. Macluumaadkaaga waxaan u hayn doonnaa mid qarsoodi ah waana kula soo xiriiri doonaa si aan kuu xasuusino inaad ku buuxiso tirakoobka khadka tooska ah. Markaad ku buuxiso tirakoobka goor hore oo khadka tooska ah, shaqaalaha tirakoobka gurigaaga ima imaanayo.
Waa la i tirin doonaa. Waxaan ballan qaadayaa in aan hubiyo in bulshayda ay ku hesho qaybteeda cadaalad ah anigoo buuxinaya tirakoobka illaa Abriil 1, 2020.
Magaca Hore iyo Magaca Dambe *
Markaad ka hesho kaarka dowladda federaalka, waxaad ku buuxin kartaa tirakoobka halkan YWCA. Waxaan bixinaa shaybaadh kombuyuutar oo gaar loo leeyahay, oo aamin ah oo ka shaqeeya xubnaha bulshada ee aad ku kalsoon tahay inay kaaga jawaabaan su'aalahaada. *